Sidee baan u baaritaanka HiSET ™? | USAHello | USAHello
Sidee baan u baaritaanka HiSET ™?
Sidee baan u qaadan HiSET ah™ imtixaanka? Maxaan u baahan ahay in aan ogaado oo ku saabsan qaadashada imtixaanka HiSET ™? Halkan waxa ku jira qalab iyo macluumaad aad u baahan tahay in ay qaataan iyo gudbaan imtixaanka HiSET ™.
halkan waxaa ku qoran 10 tallaabooyin si ay u caawiyaan aad u hesho diyaar u ah inay qaataan HiSET ah™ imtixaanka:
Gobolada qaarkood waxay bixiyaan baaritaan kale halkii HiSET ™. Waxaa laga yaabaa inay bixiyaan GED® ama TASC. Gobolo badan ayaa waxay bixiyaan doorasho. Raadi halkan haddii HiSET ™ baaritaanka waxaa la siiyaa ee gobolka:
2. Hubi in aad xaq u leedahay
Caadi ahaan waxaad xaq u yeelan doontaa in ay qaataan ka HiSET ™ imtixaanka haddii aad tahay 18 sano jir ah ama ka weyn oo aan ka qalin jabiyay dugsiga sare US a. Mararka qaarkood, Waxaa laga yaabaa in aad awoodid in aad imtixaanka haddii aad tahay 16 ama 17. wadamada qaarkood waxay weydiiyaan inaad tagto fasalo diyaarinta imtixaanka. dalalka kale ee kaliya ee ogolaan dadka deegaanka inay imtixaanka. Waad awoodaa heli HiSET ™ shuruudaha imtixaanka ee gobolka.
3. Baro imtixaanka HiSET ah
Ogow waxa aad filan kartid marka aad imtixaanka - waxa aad u baahan tahay aqoon iyo nooca su'aalo lagu weydiin doonaa inaad. Waxaad u baahan tahay inaad ogaato waxa ku HiSET ™ imtixaanka.
4. Baro aad imtixaanka
Waxaad ma qaadan karaan HiSET ™ imtixaanka online, laakiin waxaad ka heli kartaa diyaar u online. our class online lacag la'aan ah iyo imtixaan online lacag la'aan ah kaa caawin doona.
5. Raadi xarunta imtixaanka a
Waxaad ma qaadan karaan imtixaanka online. WAA INAAD imtixaanka ee qof xarunta imtixaanka a. Raadi xarunta imtixaanka hadda ama ka dib marka aad iska diiwaan.
6. Diiwaan koonto at hiset.ets.org
Waxaad go'aansan kartaa in la abuuro xisaab online at hiset.ets.org. Waxaad samayn kartaa xisaabtaada wakhti kasta - uma baahnid in aad sugto inta aad diyaar u tahay inaad qaadato imtixaanka yihiin. Your account waxaa loo yaqaan My HiSET. Gobolada qaarkood waxaad isticmaali kartaa goobta balanta imtixaanka. Sidoo kale waxaad awoodi doontaa in aad aragto natiijooyinka imtixaanka iyo dhibcaha waxaa.
Inta aad diiwaangalinta hiset.ets.org, waxaad u baahan doontaa inaad bixiso macluumaad, laakiin aan aad u baahan doontaa inaad bixiso ilaa aad diyaar u tahay inaad ballan samaysato imtixaanka yihiin.
7. Jadwal iyo bixiyo imtixaanka oo aad
Marka aad diyaar u ah inay qaataan imtixaanka, waxaad sameysan kartaa balan imtixaan aad mid ka mid ah saddex siyaabood:
online aad HiSET account
adigoo la xiriiraya xarunta imtixaanka aad
oo waca Adeegga Macaamiisha ETS at (855) 694-4738
Waxaad qayb kasta ee imtixaanka maalmo kala duwan qaadan kartaa. Go'aanso imtixaanka koowaad ama imtixaanada aad rabto in aad qaadato. Markaas dooran meesha iyo taariikhda iyo waqtiga. Haddii aad rabto in ay qaadaan dhammaan imtixaanada isku maalin, jadwalka imtixaanka si aad u yeelan karaan biririf. imtixaanka oo dhan qaadataa 7 saacadood oo 5 daqiiqo.
Waxaad haysan doontaa in ay bixiyaan lacag si ay u balansato imtixaan ah. Kharashka waa $10 waayo, mid kasta oo ka mid ah shan imtixaanada, oo lagu daray wax kasta oo lagu eedeeyay gobolka aad imtixaan kasta. Kuwani lacag dheeri ah u dhaxayn $5 in $20 per subtest. Raadi ujrada lagu eedeeyay by gobol kasta. Waxaad ku bixin kartaa mid ka mid ah baaritaanka waqti marka aad balan.
Ka hor inta aadan imtixaanka dhabta ah, dhaqmaan sida ugu badan ee aad awoodid kula free ah HiSET ™ qalabka udiyaarin iyo imtixaanka barbaradka USAHello. Layliska qaabab su'aasha iyo tilmaamo in aad arki doontaa imtixaanka.
Waxaad isticmaali kartaa imtixaanka barbarashada ee Internetka rasmiga ah HSET. Or, haddii aad qaadato imtixaanka warqad, download baaritaan rasmi ah dhaqanka HiSET in ay ku dhaqmaan qaadata imtixaanada warqad.
Imtixaanadu waxay ka dhigi doonaa Hubi in aad diyaar u yihiin maalinta imtixaanka. Oo, Natiijooyinka aad ku tusi doonaa haddii aad diyaar u ah inay qaataan imtixaanka yihiin.
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah talooyin aad ku caawin inaad Liibaantaane maalinta imtixaanka:
Ogow waxa ku HiSET ™ imtixaanka.
Haddii aad qaadato imtixaanka on computer ah, aad u hesho raaxo leh waayo-aragnimo imtixaanka ku barbarta on computer kasta.
Ka dhig adiga oo isticmaalaya imtixaan free USAHello aad!
Safar dhaqanka inay xarunta imtixaanka si uma baahnid inaad in ay ka heli markii ugu horeysay maalinta imtixaanka. Inta aad waxaa, hubi xarunta imtixaanka si aad u waydiiso sharciyada iyo macluumaad kasta oo kale oo laga yaabaa in aad u baahan tahay.
Haddii aad qaadatid Imtixaanka xisaabta warqad-samatabbixiyey, xarunta imtixaanka aad ku siin doonaa xisaabiyaha Xararad - ma waxaad isticmaali kartaa adiga kuu gaar ah. Go'aanka for nooca calculator isticmaalo waa ilaa gobolkaaga. Raadi waqti hore waxa calculator waa, si aad u dhaqmaan karaa iyadoo la isticmaalayo mid ka mid ah. Haddii aad qaadatid Imtixaanka xisaabta computer-ka samatabbixiyey, calculator waxay noqon doontaa on-screen.
in aan loo oggolaan doonaa inaad keeno warqad kuu gaar ah, laakiin waxaa la siin doonaa warqad aad samaynta qoraalada. waxaa la siin doonaa saddex go'yaal Waxaad waqti, oo waxaad weydiisan kartaa dheeraad ah haddii aad u baahan tahay.
Kaalay ugu yaraan 30 Daqiiqadihii hore ee xarunta imtixaanka si aad u hubsan kartaa in iyo degitaanka. Isticmaal musqusha sida ma jiraan nasashada ee imtixaanka. Haddii aad qabto in ay ka baxaan in ay qaataan biririf, waxay soo Bixi Iyadoo waqtiga imtixaanka aad - ma waxaad ka heli doontaa waqti dheeraad ah.
Waxaad qadan karaan dhammaan imtixaanada ama qaar ka mid ah maadooyinka haddii aad ku guul dareysato. Waad haysan kartaa imtixaanka ilaa aad ka noqotay. Waxaad qaadan kartaa subtest ah ilaa saddex jeer sanad a. Tan waxaa ka mid ballantaada hore iyo laba qoraa. Waxaa jira xeerar kala duwan oo aanad dib baaritaanka ee gobol kasta.
The HiSET ™ lambarka adeegga macmiilka waa (855) 694-4738).
Waa maxay GED?
page FAQ ee rasmiga ah HiSET ™ website